Serum ဆိုတာဘာလဲ???? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Serum ဆိုတာ daily skin care step တွေထဲက တခုဖြစ်ပြီး active ingredients 70% ပါဝင်ပါတယ်။ concentrated ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားသုံးရင် result ပိုကောင်းပါတယ်။ serum တွေဟာ ပုံမှန် ️moisturizer တွေထက် ပိုပြီး အရည်ကျဲပြီး thin ဖြစ်ပါတယ်.......water soluble ဖြစ်ပြီး အဆီပါဝင်မှု မပါသလောက်နည်းပါတယ်။
Serum တွေက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ????
Serum မှာ ပါဝင်တဲ့ molecules တွေဟာ အရမ်းသေးငယ်တဲ့အတွက် အရေပြားရဲ့ အတွင်းပိုင်းထိ ဝင်ရောက် အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်.....
ပုံမှန်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အရေပြားရဲ့ cell တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ပိုမိုကြည်လင်ပြီး လှပတဲ့ အသားအရေရရှ်ိနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက် အဟာရတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သင့်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်.....ဈေးကွက်မှာ တွေ့ရများတဲ့ serum တွေကတော့ ဝက်ခြံသမားတွေ၊ အရေးအကြောင်းရှိတဲ့သူတွေ၊ အသားအရေကြည်လင်ဝင်းပချင်တဲ့သူတွေကို target ထားပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာ တွေ့ရများတာတော့ vitamin C နဲ့ hyaluronic acid ပါတဲ့ ပစ္စ္စည်းတွေပါ........vitamin c က အသားအရေကြည်ဖို့၊ အမည်းစက်တွေလျော့နည်းစေဖို့ ဖြစ်ပြီးတော့ hyaluronic acid ကတော့ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ပါ။
Cleansing လုပ်ပြီးတဲ့ အခါ toner သုံးရပါမယ်......toner ပြီးမှ serum သုံးရမှာပါ.....ပြီးမှ ️moisturizer လိမ်းပေးရမှာပါ...
Skin care တွေ အဆင့်လိုက်သုံးတဲ့အခါ အရည်ကျဲရာကနေ ပျစ်ရာကို တဆင့်ချင်းလိမ်းရပါတယ်.....
လက်ဝါးထဲကို ၄စက် သို့ ၅ စက် ထည့်ပြီး ကျန်လက်တဖက်က လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ယူပြီး မျက်နှာကို တို့ပြီး လိမ်းပေးရမှာပါ......အဲလိုလိမ်းတာဟာ စုပ်ယူမှုအားကောင်းပြီး.....အသားအရေထဲကို ညီညီညာညာစိမ့်ဝင်ပါတယ်......ပြီးရင် moisturizer မလိမ်းခင် ၅ မိနစ်လောက်စောင့်ပါ......
ပုံမှန် ️moisturizer တွေထက်ဈေးပိုကြီးပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ ingredient တွေဟာ concentrated ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖွင့်ပြီးသွားတာနဲ့ room temperature မှာပဲထားရင် oxidized ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် အရောင်ပြောင်းတာ အနံ့ပြောင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပြီး quality ကျတတ်ပါတယ်...... တကယ် effective ဖြစ်တဲ့ product ဖြစ်သလို တဖက်ကလည်း ကရိကထ နည်းနည်းများတဲ့ ပစ္စ္စည်းပါ။